विचार – Esewanews
1 min ago	Headline, कला/खेल, विचार, विविध, समाचार 0
प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुन दसैं आज बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। घटस्थापनाको साइत बिहान ११ बजेर ४६ मिनेटमा रहेको छ। आज चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले ११ः४६ बजेअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्ने छ। दसैंको पहिलो दिन घटस्थापना गरिन्छ। घटः स्थापना अर्थात घैंटो, ...
1 min ago	Headline, अर्थ, विचार, विविध, समाचार 0
सरकारले देशभर दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुपथमूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)सहितको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यकामा १३ र मोफसलमा ६२ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार खाद्य ...
हरितालिका तीजको व्रत बसेका व्रतालुको बिहानैदेखि देशभरका शिवालयमा भीड लागेको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने तीज पर्वका अवसरमा आज बिहानैदेखि देशभरका शिवालयमा व्रतालुको भीड लागेको हो। विशेषगरी महिला व्रतालु सौभाग्यको प्रतीक रातो पहिरनमा सजिएर शिवालयमा पूजा आराधनाका लागि पुगेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर बन्द गरिए पनि पशुपति क्षेत्रमा बिहानैदेखि महिला ...
५ प्रतिशत घटेपछि नेप्सेमा लाग्यो सर्किट ब्रेक, बजार ४० मिनेटको लागि बन्द
1 min ago	Headline, अर्थ, विचार, समाचार 0
साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ। यस दिन बजार खुलेको २ घण्टा बित्न ५ सेकेन्ड बाँकी नेप्से ५.०३ प्रतिशत घटेपछि सर्किट ब्रेक लागेको हो। सर्किट ब्रेक लागेसँगै बजार ४० मिनेटको लागि बन्द भएको छ। सो अवधिसम्ममा २१५ कम्पनीको ७९ हजार ९३५ पटकको कारोबारमा ७ अर्ब १९ कराेड ...
1 min ago	Headline, विचार, समाचार 0
कोरोना महाव्याधिले सर्वत्र अत्याइरहेको थियो । मान्छेहरू घरभित्रै थुनिएका थिए । त्यही उकुसमुकुसबाट उम्किएर म हुम्ला पुगेको थिएँ, गत वैशाखमा । त्यसअघि खप्तड र बर्दियाको फन्को लगाइसकेको थिएँ । तेस्रो गन्तव्य बनाएँ, हुम्लालाई । अझ भनौं, हुम्लाको नाम्खा ख्याङ्ग्झोङ गुम्बा (याल्बांग गुम्बा) । त्यहाँ वर्षेनि छ्याम पूजा गरिन्छ । छ्याम ...
सहिदहरु को सम्झनामा, सहिद (कविता)
1 min ago	Headline, विचार, विविध 0
म गंगालाल…. रेलको लीकमा हाम फाली आत्महत्या गरेर यहाँ आएको हुँ ! एक हुल समृद्धिका सपनाहरूलाई भोग चढाउन कोही त चाहिन्छ भन्ने हल्ला चल्यो ! नदेखे पछि तयार कसैलाई झ्वाम्मै हाम फालें स्वप्न -पटरीमा स्वर्ण-पटरीमा ! पलायन मगज रसीला आँखा मुर्दा सपना अनि काटिएका हजारौं ...
1 min ago	विचार 0
साथमा पर्याप्त धन हुँदैमा कोही धनी हुँदैन, संसारका हरेक मानिस धनी छन्, तर आफूसँग भएको धनलाई चिन्नुपर्छ । चिन्नलाई दुरदृष्टि आवश्यक पर्छ, त्यो जो कोहीसँग नहुन सक्छ । परापूर्वकालमा एक व्यक्ति आफ्नो गरिबीको कारण सोध्न महामानव गौतम बुद्धकोमा पुग्यो । भगवान ‘म किन गरीब ?’ भन्ने उसको प्रश्नमा बुद्धले यस्तो ...